Samachar Batika || News from Nepal » सलह किरामा भरपुर मात्रामा पौष्टिक तत्व पाइन्छ, यी देशमा यसरी परीकार बनाईन्छ। जानौ यसको पुरा इतिहास
सलह किरामा भरपुर मात्रामा पौष्टिक तत्व पाइन्छ, यी देशमा यसरी परीकार बनाईन्छ। जानौ यसको पुरा इतिहास
कुनैदिन विश्वले चरम खाद्य सं’कट झेल्नेछ र भोकम’रीको स्थिति आउनेछ । चामल, गहुँ, मकै जस्ता मूख्य खाद्यन्न सर्वत्र अभाव हुनेछ । त्यसपछि पेट भर्न वा बाँच्नका लागि मान्छेले किरा–फट्यांग्रालाई आफनो भोजन बनाउनेछ । के हामी आज यस्तो दिनको कल्पना गर्न सक्छौं ?
जुन कुरा हेर्दै दिगमिग लाग्छ, त्यसलाई कसरी भोजनको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछौं ? झट्ट सोच्दा यस्तै लाग्छ । तर, अहिले जसरी भोजन–संस्कारको विकास र यसबारे खोज–अभ्यास भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा भोलिका दिनमा सलह जस्ता असंख्यौं किराफट्यांग्रा हाम्रो भान्साको खान्की बन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
त्यसो त विश्व फुड मेनुमा यस्ता किराफट्याङ्ग्राको भेराइटी पनि समावेश हुन थालेको छ । कतिपय ठाउँ यस्तै परिकार विशेषका लागि चिनिदैछ । अझ घतलाग्दो कुरा त के भने, यी परिकारमध्ये सलह जस्ता फट्यांग्रा प्रजाति सर्वाधिक रुचिकर मानिएको छ ।
कतिपय ठाउँ यस्तै परिकार विशेषका लागि चिनिदैछ । अझ घतलाग्दो कुरा त के भने, यी परिकारमध्ये सलह जस्ता फट्यांग्रा प्रजाति सर्वाधिक रुचिकर मानिएको छ ।
अहिले हामी एकसाथ दुई किसिमको परिस्थिती झेल्दैछौं । एक त, लकडाउनका कारण अन्न–उत्पादनको काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ । खेतीपातीको मूख्य सिजनमै किसानहरु अनुत्पादक रुपमा घरभित्र थुनिएका छन् । अर्कोतिर सलह जस्ता फौजी किरा र लगातारको झरीले अन्नबाली स’खाप पार्दैछ । यावत् प्रतिकुलताले भोलिका दिनमा विश्वले खाद्य सं’कटको सा’मना गर्नुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनले गर्दा अन्न-उत्पादनमा ह्रास आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । अर्कोतिर रासयनिक मल, वि’षादी आदिको कारण माटोले आफ्नो उर्बरा शक्ति गुमाउँदै गएको पाइन्छ । कृषि विज्ञहरुका अनुसार माटोलाई आवश्यक पर्ने पोटास घट्दै जानु र एसिडको मात्रा अत्याधिक बढ्नुले माटोले उत्पादन क्षमता गुमाउँदै गएको छ ।
एकातिर खाने मुख अर्थात जनसंख्या बढ्दै जानु, अन्न–उत्पादनलाई अनेक भेराइटी बनाउन प्रयोग गरिनु, माटोको उर्वराशक्ति घट्दै जानु, जलवायु परिवर्तन हुनु जस्ता अनेकन कारणले भोलिका दिनमा हामीले खाद्य सं’कट झेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।
एक अध्ययन अनुसार मूख्य खाद्यन्नको रुपमा रहेको धान, चामल, मकै जस्ता अन्न उत्पादन समेत घट्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि अहिलेको जस्तो प्राकृतिक वि’पत्तीले यसलाई थप अ’सर गरिरहेको छ । को’रोनाको कारण विश्वव्यापी रुपमा गरिएको लकडाउन होस् वा अन्नबालीमा सलहको तिब्र आ’क्रमण, यसले हाम्रो खाद्य भण्डारमा सं’कट पैदा गर्ने जो’खिम छँदैछ ।
त्यसो त विगतमा सलह जस्ता किराकै कारण भोकम’रीको स्थिति भोग्नुपरेको कथाहरु सुन्न÷पढ्न पाइन्छ । नेपालमा पनि सलहले बालीनाली स’खाप पारिदिएपछि भोकम’री लागेको घ’टनाहरु सुन्न पाइन्छ ।
सलहलाई मान्छेले आफ्नो भोजन बनाएको उदाहरण पनि पाइन्छ । कुनैबेला खाद्य सं’कटबाट जुधिरहेको यमन र ओमानले सलहलाई नै प्रोटिनको रुपमा खाने गरेको इतिहास छ ।
घतलाग्दो कुरा के भने, विगतमा सलहकै कारण भोकम’रीको अवस्था आएको पढ्न÷सुन्न पाइन्छ भने भोकम’रीबाट बच्न सलहलाई मान्छेले आफ्नो भोजन बनाएको उदाहरण पनि पाइन्छ । कुनैबेला खाद्य सं’कटबाट जुधिरहेको यमन र ओमानले सलहलाई नै प्रोटिनको रुपमा खाने गरेको इतिहास छ ।
केही समयअघि बिबिसी हिन्दीको अनलाइन संस्करणमा एउटा फिचर छापिएको थियो, किरा–फट्याङ्ग्रको भोजन सम्बन्धी । त्यस अनुसार भविष्यमा मानव समुदायले ‘सुपर फुड’को रुपमा किरा फट्याङ्ग्रालाई आफ्नो खान्की बनाउनेछ ।
पश्चिमी देशका मानिसहरुले किरा फट्यांग्रालाई सम्पूर्ण प्रोटिनको स्थायी स्रोतको रुपमा हेर्न थालेको पाइन्छ । यी साना किरामा पशुपंक्षीको प्रोटिन जस्तै अमिनो एसिड हुन्छ, जो मानव आहारका लागि आवश्यक हुन्छ ।
बिबिसीमा प्रकाशित फिचरमा लेखिएको छ, ‘किरामा पनि फट्याङ्ग्रा सबैभन्दा लोकप्रिय हुनेछ । यसको प्रयोग आटा र स्न्याक्समा हुनेछ ।’
के हुन्छ फट्याङ्ग्रामा ?
फट्याङ्ग्रामा उच्च प्रोटिनका साथसाथै आइरन, क्याल्सियम र भिटामिन बि–१२ भरपुर मात्रामा हुन्छ । थाइल्यान्डको बजारमा यस्तो खान्की बिक्री हुन्छ । र, उनीहरुको ग्राहक भने गैर थाइ छन् ।
हुन त थाइल्यान्डका बासिन्दा फट्याङ्ग्रा बाहेक अन्य किरा खान पनि अभ्यस्त छन् । उनीहरु डिप फ्राइ स्न्याक्सको रुपमा किरा खान्छन् ।
फट्याङ्ग्रामा उच्च प्रोटिनका साथसाथै आइरन, क्याल्सियम र भिटामिन बि–१२ भरपुर मात्रामा हुन्छ । थाइल्यान्डको बजारमा यस्तो खान्की बिक्री हुन्छ
त्यसो त पश्चिमी मुलुकका कतिपय शाकाहारी मानिसहरु पनि किरा खान सुरु गर्दैछन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाइएको छ कि, फट्याङ्ग्राले दु’खाई अनुभव गर्दैन । हुन त यसलाई पुष्टि गर्ने रिसर्च अहिलेसम्म भएको छैन । यद्यपी वैज्ञानिकहरुले किरा कल्याणका शोध सुरु गरिसकेका छन् ।
विश्वका कतिपय भेगमा अहिले किरा फट्याङ्ग्रा खान थालिएको छ । किराको अनेकन परिकार बनाउन थालिएको छ । ति भेगका लागि यो कुनै आश्चर्य वा नौलो कुरा रहेन । संयुक्त राष्ट्रसंघका खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)को अनुमान छ कि, विश्वभरमा थुप्रै मानिसले आफ्नो खानामा नियमित रुपले किरा फट्यांग्रा सामेल गरिरहेका छन् ।
किरा खाने सन्दर्भमा थाइल्यान्ड एशियाको प्रमूख केन्द्र हो ।
थाइल्यान्डको चामल उत्पादक उत्तर–पूर्वी क्षेत्रबाट किरा खाने परम्परा सुरु भएको थियो । त्यहाँ रैथाने व्यान्जनमा किरालाई साइड डिशको रुपमा पस्किने गरिन्थ्यो ।
अहिलेसम्म पश्चिमी देशका केही उत्सुक पर्यटकले पनि यी व्यन्जन चाख्ने गरेका छन् । अहिले थाइल्यान्डले पश्चिमी देशमा खान लायक किरा निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सन् २०१७ मा थाइल्यान्डको फट्यांग्रा पालनको दिशानिर्देश तय गरेको छ, ताकि त्यसको सुरक्षित र कुशल उत्पादन हुन सकोस् ।
थाइल्यान्डका अधिकांश कीट फार्म साना छन्, तर शोधकर्ता र लगानीकर्ताले त्यसको उत्पादन बढाउने उपाय खोजिरहेका छन् ।
चियांग माईमा सन् २०१६ मा स्थापित फट्याङ्ग्रा ल्याबमा स्वचालित प्रकियामाथि शोध भइरहेको छ । उक्त फार्मका सह संचालकले बताए अनुसार त्यहाँ आहिले हरेक महिना ३ दशमलव ५ टन किट उत्पादन क्षमता छ । अब माग बढ्ने प्रतिक्षा छ ।
विश्वभरमा बिटल्स र झुसिलकिरा सबैभन्दा बढी खाइने किरा हो । यद्यपी विकसित मुलुकमा फट्यांग्रा मूख्य परिकारको रुपमा लोकप्रिय छ । किराको बर्गर अर्थात इन्सेक्ट बर्गर र मीलवार्म नुडल्स केही युरोपिया सुपरमार्केटमा पाउन थालिएको छ । साथै फट्यांग्राले बनेको प्रोटिन बार युरोप र उत्तर अमेरिकाको बजारमा आम भएको छ ।
यदि खान लायक किरालाई ठूलो मात्रामा पाल्ने हो भने पशुबाट मिल्ने प्रोटीन बराबर प्रोटिन प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
पश्चिमी मुलुकमा फट्यांग्रा निकै लोकप्रिय भएको छ । हुन त साङ्ला किरामा पनि धेरै प्रोटिन हुन्छ । त्यसलाई आटामा मिलाउन सकिन्छ । तर, साङ्लाको बारेमा नकारात्मक छवी जोडिएको छ । घाँसको मैदानमा खुला रुपमा हुर्किने फट्यांग्रा घरको कुनाकाप्चामा बस्ने साङ्लाभन्दा बढी सुपाच्य हुन्छ ।
सन् २०१६ देखि सन् २०१७ सम्म खान लायक किराको बारेमा जति एकेडेमिक पेपर प्रकाशित भए, त्यती अघिल्लो १० बर्षमा छापिएको थिएन । किराको बारेमा विज्ञानको रुची बढाउनुको मूख्य कारण हो, पर्यावरणिय स्थिरता । स्वस्थ्य र पोषणको हिसाबले किरा पनि प्रोटिन दिने अर्को जनवार जस्तै हो । यसको मूख्य फाइदा भनेको पर्यावरण हो ।
यदि खान लायक किरालाई ठूलो मात्रामा पाल्ने हो भने पशुबाट मिल्ने प्रोटीन बराबर प्रोटिन प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसका लागि गाई, सुँगुर, कुखुराको उत्पादनभन्दा एकदमै कम प्राकृतिक संसाधन लाग्छ । साथै ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन पनि कम हुनेछ । यसले पर्यावरणमा राम्रो प्रभाव पार्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । किनभने यसका लागि ठूलो क्षेत्रफलको जमिन, अत्याधिक पानीको खपत हुँदैन ।
एजेन्सीको सहयोगमा अमेरिकी ग्लोबल मार्केट इनसाइट्सको रिपोर्ट अनुसार उच्च प्रोटिन र सुविधाजनक खाद्य पदार्थको बढ्दो मागको कारण खान लायक किराको बजार सन् २०१७ को ५ दशमलव ५ करोड डरलबाट बढेर सन् २०२४ मा ७१ करोड डलर हुनेछ । यूरोपियन संघमा सन् २०१८ को नोवेल फूड रुल्स्ले मुख्यधारको खाद्य प्रशोधनमा किरालाई सामेल गर्नका लागि एक कानुनी ढाँचा बनाउन सुरु गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय चीनको वुहानबाट को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलियो र यसले विश्व मानव समुदायलाई आच्छु–आच्छु बनायो, बनाइरहेकै छ । को’रोना भा’इरस किन र कहाँबाट फैलियो भन्ने सन्दर्भमा धेरैको अनुमान थियो, चमेरो र सालक यसको कारण हुनसक्छ ।
खासमा चीनको वुहान क्षेत्रमा चमेरो, सालक जस्ता जीवको मासु खाने गरिएको र त्यही माध्यामबाट को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिएको मानिन्छ । यही कुरालाई आधार मानेर कतिपयले के तर्क गरिरहेका छन् भने, मानव शरीरका लागि प्रकृतिले जुन–जुन खानेकुरा उपलब्ध गराएको छ, त्यही मात्र खानुपर्छ ।
पश्चिमी मुलुकका कतिपय शाकाहारी मानिसहरु पनि किरा खान सुरु गर्दैछन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाइएको छ कि, फट्याङ्ग्राले दु’खाई अनुभव गर्दैन । हुन त यसलाई पुष्टि गर्ने रिसर्च अहिलेसम्म भएको छैन । यद्यपी वैज्ञानिकहरुले किरा कल्याणका शोध सुरु गरिसकेका छन् ।
शरीर र पाचन यन्त्रको प्रकृतिलाई हेरेर मान्छेलाई ‘शाकाहारी भोजन’ मात्र उपयुक्त हुन्छ । जीवजन्तुको मासु वा अप्राकृतिक खानेकुरा मानव शरीरका लागि अनुकुल छैन । आज जे–जति रोग लागिरहेका छन्, त्यसमा यस्तै अप्राकृतिक खानेकुरा मूख्य कारण हो भनिदैछ । यस्तो अवस्थामा किरा फट्याङ्ग्राले हाम्रो भोक टार्नेछ वा अरु रोग र सं’क्रमणको दलदलमा फसाउनेछ ?
प्रकाशित मिति १५ असार २०७७, सोमबार ०४:४४
७ दिनमै शरिरका मुसा तथा कोठी गा’यब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
३० वर्ष पुगेका हरेक महिलाले अनिवार्य गराउनैपर्छ यी ५ परीक्षण, नत्र जीवनभर हुन्छ पछुतो
के बिल गेट्सको डि’भोर्समा चिनियाँ महिलाको इन्ट्री भएकै हो ? हेर्नुहोस (फोटो फिचर)
आफ्नै सौतेनी छोरासँग बिहे गरेकी यी युवती आमा बन्दै, आमाछोराको यस्तो भिडीयो हेर्नुस् (भिडीयो/ फोटो)
विमानको सिँढी चढ्दा ३ पटक लडे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन (भिडियोसहित)
साबधान ! कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिले यी खानेकुराहरु खाँदै नखानूहोस्
नेहा कक्कडले इण्डियन आईडलमा एक एपिसोड बराबर कति रकम लिन्छिन ? थाहा पाउनुहाेस
प्रियंका चोपडालाई देखेर, फ्यानहरुले भने – ‘जतिबेला पनि देखाउनै पर्छ र ?’
प्रिंयका कार्कीको भाइरल तस्विर
झुटो खबरले स्त’ब्ध भएकी इलियाना